Manchester Cit Oo Guul Ka Gaadhay Arsenal, Kaddib toddobaadyo Abaari Haysay
HomeWararka MaantaManchester Cit Oo Guul Ka Gaadhay Arsenal, Kaddib toddobaadyo Abaari Haysay
Machester Citya ayaa ku ruqaansatay kaalinta labaad ee horyaalka Premier League, kaddib markii ay si xun u burburisay qaab ciyaareedkii cajiibka ahaa ee Arsenal oo ay ku garaacday 2-1.
Gool uu daqiiqaddii shanaad ee bilowga Ciyaarta u dhaliyey Arsenal weeraryahanka Theo Walcott oo kubbad qurux badan ka helay saaxiibkii Alexis Sanchez ayaa ka ixiyey tababare Guardiola iyo xiddigihiisa oo uu dib ugu soo laabtay Yaya Toure oo buuxiyey booska Fernandinho oo ganaax ku maqnaa, niyaddana u dejiyey tababare Arsene Wenger oo qaybta hore ku dhamaystay 1-0.
Arsenal oo ciyaartii toddobaadkii hore ay ugu safartay Everton kala kulantay guul-darro qadhaadh, ayaa safarkeedii Axadda ee Manchester City weji gabax kale loogu xambaariyey, kaddib markii ay laba gool qaybta dambe ka dhaliyeen Leroy Sane oo baas qurux badan ka helay David Silva iyo Raheem Sterling oo kubbad difaacu ka baqday daba-mariyey goolhaye Petr Cech.
Ciyaarta oo 65% ay maamulkeeda gacanta ku haysay Manchester City, ayaa waxay dhamaystirtay toddobaad aan farxad u lahayn Wenger oo uu la kulmay laba guul-darro.
Guushan ayaa Manchester City waxay ka caawisay inay kaalinta labaad si ku-meelgaadh ah u gasho, iyadoo yeelatay 36 dhibcood, laba dhibcoodna ka sarraysa Liverpool oo kulankeeda toddobaadka Isiinta la ciyaaraysa Everton oo ay isku magaalo yihiin iyo Arsenal. Kooxda hoggaanka haysa ee Chelsea ayaa iyaduna toddoba dhibcood oo saafi ah ka horreysa Man City.o
Laacibkii weynaa ee Emerson Oo Talo Waayeelnimo siiyey Pogba
13/02/2015 Abdiwahab Ahmed
Sterling Oo Manchester City Kaalinta Koobaad Kaga Saaray Group D
Mo Farah: Heesaha Mohamed BK Ayaan Jecelahay
11/04/2015 Abdiwahab Ahmed